स्थापितलाई उछिनेर सिर्जना दोस्रो स्थानमा, बालेन शाह अग्रस्थानमै,कति आयो मत ? - jagritikhabar.com
स्थापितलाई उछिनेर सिर्जना दोस्रो स्थानमा, बालेन शाह अग्रस्थानमै,कति आयो मत ?
नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई उछिन्दै नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंह काठमाडौं महानगरपालिकामा दोस्रो स्थानमा पुग्न सफल भएकी छन् ।
राष्ट्रियसभा जारी मतगणना १९ हजार १४९ भोट ल्याएर कांग्रेसकी सिर्जना दोस्रो स्थानमा उक्लिएकी हुन् । सिंह दोस्रो स्थापना उक्लिदा एमालेका स्थापित तेस्रो स्थानमा झर्दै १९ हजार १ सय १३ मतमा सीमित हुन पुगेका छन् ।
पहिलो स्थानमा रहेका बालेन शाह उनीहरूभन्दा धेरै अगाडि छन्, लौरो चुनाव चिन्हसहित स्वतन्त्र उम्मेदवार शाह ३४ हजार ९ सय ४८ मतसहित अग्रस्थानमा छन् ।
अर्जुनधारा नगरपालिकामा संयुक्त गठबन्धनलाई पछि पार्दै नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार बलदेव सिंह गोम्देन तामाङ निर्वाचित हुनुभएको छ । तामाङले संयुक्त गठबन्धनको उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसकी युवा नेत्री रञ्जिता कार्कीलाई पराजित गर्नुभएको हो । नगरप्रमुखमा निर्वाचित तामाङले १९ हजार १६९ मत प्राप्त गर्नुभयो भने कार्कीले १३ हजार ७४३ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
यता उपप्रमुख पदमा समेत एमालेबाट नै खड्गमाया पराजुली निर्वाचित हुनुभयो । उहाँले १७ हजार ६३७ मत प्राप्त गर्नुभयो । संयुक्त गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जितेश योञ्जनले नौ हजार ७१ मत प्राप्त गर्नुभयो । विसं २०७४ मा भएको निर्वाचनमा समेत अर्जुनधारा नगरपालिकामा एमाले नै जीत हासिल गरेको थियो ।
प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद जीत हासिल गरेको एमालेले यो पटक पनि दुवै पद आफैँले सुरक्षित गरेको छ । ११ वटा वडा रहेको यो नगरमा वडा नं १ मा उप्रेन्द्र बस्नेत, २ मा नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ३ मा सीताराम भट्टराई, ४ मा अम्बरबहादुर कटुवाल, ५ मा गीताराज खड्का, ६ मा हरिशचन्द्र वास्तोला कांग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभयो । त्यस्तै वडा नं ७ मा एमालेका गोविन्द प्रसाद खतिवडा, ८ मा एमाले कुमारप्रसाद उप्रेती, ९ मा कांग्रेसबाट भीष्म मिश्र, १० मा एमालेका भुपेन्द्र न्यौपाने र ११ मा एमालेबाट नै खगेन्द्र इङ्नाम निर्वाचित हुनुभएको छ ।